Uhuru Kenyatta oo bur burin ku wado hanaanka dacwadda badda . |
Uhuru Kenyatta oo bur burin ku wado hanaanka dacwadda badda .
Muqdisho-Wargayska African Intelligence ayaa daabacay maqaal dheer uu kaga hadlayo dacwadda badda ee Kenya ku dooneeso badeena, isagoona wargayska carabaabay in madaxwaynaha dalkaasi Uhuru Kenyatta uu bur burin ku hayo hanaanka dacwadda ee kasoconayso Maxkamadda Caalamiga ee Cadaalada (ICJ).
Madaxwayanha Kenya waxa uu dhawr jeer saameeyay talaabooyin dib loogu dhigayo dacwadda taas oo uu kaga hortagayo go’aanka kasoo bixi kara Maxakamdda hadii la dhagaysto dacwadda muraanka Kenya ay galisay bada Soomaaliya.
Wargaysku waxa uu carabaabay in madawayne Kenyatta uusan diyaar u ahayn in uu hogaansamo go’aan walba oo kasoo baxa maxkamadda cadaalada dunida islamarkaana uu ku eedeenayo in ay u xaglinayso dhanka Soomaaliya,
Dacwadda badda oo bilaabatay sanadkii 2014 ayaa dhawaantan markii sadaxaad dib loo dhigay iyadoona markii ugu danbeesay lago’aamiyay in ay qabsoonto 8’da bishan Juun balse sababo lagu sheegay halista caabuqa Karona ayaa dib loogu dhigay markii 3’aad.
Waxaana dad badan oo ay kamid yihiin siyaasiyiin, xilibaano iyo madaxwaynayaal hore oo dalka soomaray ay ku tilmaameen mid niyad jan ku ah guushii ay dad Soomaaliyeed ka sugayeen dacwadda muranka ay Kenya galisay badeena.